တရုတ်နိုင်ငံ၏ livestreaming ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၆၁၇ သန်းထိရှိလာ - Xinhua News Agency
ရှန်ဟိုင်း ၊ မေ ၁၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၌ အွန်လိုင်း livestreaming ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ အရေအတွက်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၆၁၇ သန်းထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ livestreaming လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။livestreaming အမှီပြု အကောင့်အရေအတွက်မှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် သန်း ၁၃၀ သန်း ကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာ အဖွဲ့အစည်း၏ livestreaming ဌာနခွဲမှ ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ယင်းဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းဈေးကွက်သည် ယွမ် ၁၉၃ ဘီလီယံကျော်(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံခန့်) တန်ဖိုးရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ COVID-19 ကပ်ရောဂါ မဖြစ်ပွားမီကပင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ Livestreaming သည် လျှင်မြန်စွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ထိပ်တန်းပလက်ဖောင်း ၂၀ ဝန်းကျင် အပါအဝင် အွန်လိုင်း livestreaming ဝန်ဆောင်မှု ပေးရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် အင်တာနက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၆,၀၀၀ နီးပါး ရှိခဲ့ပြီး စတော့ဈေးကွက်တွင် livestreaming ပလက်ဖောင်း ၉ ခု စာရင်းဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
SHANGHAI, May 18 (Xinhua) — The number of online livestreaming service users in China reached 617 million in 2020, according toareport on the development of China’s livestreaming industry.
The number of livestreaming anchor accounts exceeded 130 million by the end of 2020, said the report released by the livestreaming branch of the China Association of Performing Arts on Tuesday.
Livestreaming in China was already burgeoning even before the COVID-19 epidemic, with the industry market estimated to be worth over 193 billion yuan (about 30 billion U.S. dollars) in 2020, according to the report.
By the end of 2020, China had nearly 6,000 Internet business units qualified to offer online livestreaming services, including around 20 leading platforms, while nine livestreaming platforms had been listed on the stock market. Enditem
အနာဂတ်ကိုပုံဖော်နေကြသည့် Z မျိုးဆက်လူငယ်များ